Midzi yakarungwa neparsley negariki, inonaka! | Kicheni Mapepa
Midzi yakarungwa neparsley negariki
Carmen Guillen | | Spanish Cuisine, Cold Kutanga, Nyama Recipes
Iresipi yanhasi inogona kuvengwa kana kudiwa. Kwete, harisi rokwe kana sikafu, asi chikafu chine hunhu hwakanyanya uye hunoshamisa uhwo Unogona kuifarira zvakanyanya kana iwe hapana chaungade. Isu tinovimba kuti vazhinji vevaverengi vedu vanozvifarira uye vanogona kunakirwa neino chinonaka chando chando: Mhunga dzakarungwa neparsley negariki.
Inogona kupihwa kuperekedza imwe dhishi, sedhishi rimwechete pakudya kana kungoita se "tapas" seapititi pakati pemangwanani pamberi pemasikati.
Isu tinokusiya iwe neresipi! Zviri nyore kwazvo!
Kwemazuva ano gungwa rinotonhorera rinogadzirwa nezvinonaka zvakagochwa zvakarungwa neparsley negariki yakachekwa.
Imba yekicheni: Tsika
1 kg yema roast
Apple cider vhiniga
Mune pani yekutsvaira kana griddle isu tinoisa iyo kugocha kunogocha pamusoro pekupisa kwepakati kuitira kuti zviitwe nemazvo, zvese kunze nekumukati. Kana vapedza zvakanaka tinovaisa parutivi uye tinocheka kuita zvidimbu zvidiki (sezvakaratidzwa mumufananidzo).
Isu tinovaisa mundiro hombe uye tinotanga mwaka: isu tinocheka zvidimbu zvegoriki, isu tinowedzera iyo coriander uye parsley zvakare chakatemwa, tinokanda maorivhi, munyu uye vhiniga fambisa zvakanaka.
Takachiisa mu Firiji kweinenge awa uye tinogona kudya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Mapepa ePasi » Spanish Cuisine » Midzi yakarungwa neparsley negariki
Round mombe naPorto